Fanitarana ny seranam-piaramanidina Ivato : Efa 60 isan-jaton’ny asa no vita -
AccueilRaharaham-pirenenaFanitarana ny seranam-piaramanidina Ivato : Efa 60 isan-jaton’ny asa no vita
13/07/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Mihazakazaka ny fanitarana ny seranam-piaramanidina Ivato. 13 volana taorian’ny fanombohana ny asa dia efa vita ny 60 isan-jato. Lehibe dia lehibe ity seranam-piaramanidina vaovao ity satria mirefy 17 500 metatra toradroa ny velarany, izay manaraka ny fenitra iraisam-pirenena. Tena maoderina ary miavaka satria tsy hisy intsony ny olona midina mandeha amin’ny tany rehefa miala ny fiaramanidina fa avy hatrany dia efa misy tohatra hatao lalana mivoaka avy anatin’ny fiaramanidina miditra ny trano. Omaly dia tonga nitsidika sy nanara-maso ny fizotran’ny asa ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery sy ireo mpikambana sasantsasany eo anivon’ny governemanta. Notsipihany nandritra izay fotoana izay fa, « fihazakazahan’ny asa eo amin’ny fampandrosoana ny fametrahana ny seranam-piaramanidina eto Ivato. 50 taona lasa no nanorenana ny seranam-piaramanidina ampiasaina amin’izao, ary 50 taona aty aoriana indray vao nisy asa fanorenana fotodrafitrasa goavana toa izao ho fanatsarana ny seranam-piaramanidina. Seranam-piaramanidina raitra sy hary fomba ary manaraka ny fenitra iraisam-pirenena no ahorina mba ho fampandrosoana sy ho tombontsoan’ny Firenena. »
Mitentina 96 tapitrisa Euros ny fanamboarana ny fotodrafitrasa, ary tsy misy vola na Ariary aza miala amin’ny kitapom-bolam-panjakana fa famatsiam-bolan’ny mpampiasa ny fiaramanidina no ahafahana manao ny asa, izany hoe fiaraha-miasan’ny 3P na “Partenariat public privé”. Fantatra fa amin’ny fiandohan’ny taona 2020 no hiasa ity seranam-piaramanidina ity. Izay ny orinasa CMBI (Colas Madagascar sy Bouygues Bâtiment International) no manao ny asa. “Efa ao avokoa ny fitaovana rehetra hanatontosana ny fotodrafitrasa fa ny tena lava dia ny fotoanan’ny andrana satria mila atao andrana avokoa ireo fitaovana rehetra mialohan’ny fampiasana azy. Ny fiandohan’ny taona 2020 vao tena miasa tanteraka ny seranam-piaramanidina vaovao. Hanova endrika ny vavahadin’ny firenena malagasy izy ity. Tafiditra ao anatin’ny vinan’ny fisandratana, izay mijery lavitra, tsara ary manaraka ny fenitra ary hisitrahan’ny rehetra mampiasa izany seranam-piaramanidina izany. Marihiko fa fotodrafitrasa tafiditra ao anatin’ny fiaraha-miasan’ny 3P, ary tsy misy vola mivoaka amin’ny kitapom-bolam-panjakana fa famatsiam-bolan’ny mpampiasa fiaramanidina”, hoy hatrany ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery. Marihina moa fa efa vita 100 isan-jato ny arabe fandehanan’ny fiaramanidina eny Ivato ity fa ny fanamboarana trano sisa.
Nomarihina ihany koa fa tsy Ivato ihany no vatsiana ara-bola miaraka amin’ny 3P fa eo koa ny seranam-piaramanidina any Nosy-be izay hitarina miaraka amin’ny any Ivato ihany. Ny seranam-piaramanidina Nosy be izay ho vita amin’ny volana septambra ho avy izao ny ampahany lehibe, ary amin’ny faran’ity taona 2018 ity ny vinavinaina hotokanana. Araka ny fanambarana mantsy, dia efa vita 100 isan-jato ihany koa ny arabe fandehanan’ny fiaramanidina any an-toerana fa ny fanamboarana ny trano koa sisa. Mitentina 15 tapitrisa Euros ny teti-bidiny. Fa mialohan’ny fitsidihana ny seranam-piaramanidina Ivato dia nitsidika ny fizotran’ny fanamboarana ny lalana vaovao Tsarasaotra-Ivato sy ny fanamboarana ny toby miaramila izay hamindrana ny RFI Ivato ihany koa ny Filoham-pirenena. Ho an’ity farany dia efa ny 90 isan-jaton’ny asa no vita ary afaka iray volana sy tapany eo noho eo dia afaka hiasa izany. Mahakasika ny lalana Tsarasaotra-Ivato kosa indray dia nanambara ny Filoha fa ilain’ny firenena ny fananana lalana mateza sy maharitra. Ireo rehetra ireo izay tafiditra amin’ny fanamboarana ny tanànan’Antananarivo sy ny fanavaozana ny renivohitr’i Madagasikara. Ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina, izay nanararaotra nisaotra ireo mpiara-miombon’antoka rehetra amin’ny fametrahana ny fahatokisana amin’i Madagasikara amin’ny fanaovana ny fotodrafitrasa tahaka izao. Nisaotra ireo orinasa ihany koa izay Malagasy ny ankamaroany, fa indrindra ireo mpiasa miisa 1000 manatanteraka ny asa andro aman’alina.